Amabhonasi ekhasino aseJalimane - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Ukungena Germany kudala unesimo esivumelekile semthethweni, nokho esingavunyelwe ncamashi eJalimane. Isikhathi eside, endaweni ethile ebangeni le-2008 ne-2012, ukubheja kumenyezelwe ngokungemthetho ngohulumeni wezwe. Ngenhlanhla, ikilabhu elithanda abantu baseJalimane abancoma ukungazethembi kungenzeka, lokhu akusilo iqiniso.
Njengamanje, abadlali bangadlala kumakilabhu okugembula aku-inthanethi avela emhlabeni wonke futhi bathokozele imidlalo esezingeni eliphakeme yeNetEnt evela ezinduduzo zamakhaya abo noma ngokujaha.
Kuleli khasi, siqoqe amakilabhu amahle kakhulu wokugembula waseJalimane anikezela izigaxa zokwamukelwa eziphezulu zabadlali abasha abavela eJalimane. Zihlole, nebhukwana lethu elilungele amakilabhu wokugembula waseJalimane, ngaphansi.
Amakhasino Ahamba Phambili E-inthanethi Abadlali BaseJalimane
Ubungako bamakilabhu wokugembula afinyeleleka kubadlali baseJalimane manje asebukhulu kakhulu, kodwa futhi ngakolunye uhlangothi luthuthukisa isinyathelo ngesinyathelo. Lokhu kusho ukuthi bonke abadlali beJalimane abanenhlanhla banesibalo esikhulu sezindawo okufanele babhekabheke kuzo, noma kunjalo kusikisela ukuthi kungenzeka baphele amandla yisinqumo. Ngokwethuba lokuthi kunezinombolo ezinkulu kangaka okufanele zikhethwe, kungakuhle ngani ukuthi ziqale?
Zonke izinto ezibhekwayo, lapha kwi-NetEnt Casino sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi indlela ebheke ekukhetheni iklabhu yaseJalimane yama-wager ilula njengoba ingavunyelwa. Kungaleso sizathu siqoqe ndawonye onke amakilabhu wokugembula akhamba phambili waseJalimane, futhi sawethula kuwe ngendlela elula, enobulungiswa futhi etholakalayo. Amabhonasi ekhasino waseJalimane
Sizofaka kahle kahle ukuthi yini engakholeki kangako ngabo, ukuthi yikuphi ukushoda, yimiphi imivuzo nokuthuthuka okunikezwayo futhi iyiphi ongadlala kuyo yonke imidlalo emangalisayo yeNetEnt.
Iklabhu yaseJalimane yeNetEnt ingenye yobungcweti bethu, akudingeki ukuthi uye kwenye indawo ukuthola idatha enhle kulezi izindawo.
Amakhasino WaseJalimane Wenyanga
Njengoba sishilo, kunesamba esikhulu sekilabhu yaseJalimane lapho ngaphandle kwabadlali abanomdlandla baseGerman abangasisebenzisa, noma kunjalo kunzima ukukhetha phakathi. Enye indlela elula kakhulu yabasizi bethu baseJalimane ukukhetha amaklabhu okugembula amahle kakhulu ukuhlangana nokwakamuva neklabhu yethu yaseJalimane yenyanga.
Ukuxazulula ukuthi yiliphi ikilabhu elikususa esikhungweni sokuzijabulisa nganoma iyiphi inyanga, sizobe senza ukwahlulela kwethu kuncike ngobuningi bezinto ezinkulu, kodwa-ke ngokungeziwe sizofaka ezinye izindlela ezengeziwe ikakhulukazi kubalandeli bethu baseJalimane.
Amakilabhu okugembula waseJalimane enyanga azoba yinto eqhubayo, ngakho-ke ngokuqhubekayo sizobuyekeza isimo senani elikhulu labaphikisi bese ukhetha futhi. Lokhu kufanele kusho ukuthi ngokuqhubekayo kuzoba namakilabhu amasha wokugembula amasha - noma lawo afanayo angakholeki ethubeni lokuthi aqhamuke ngokuthembekile.
IKhasino yeJalimane yePaypal ehamba phambili yemidlalo yakho ayithandayo
Amakhasino amahle kakhulu wePaypal eJalimaneNot asizukuletha kini amakilabhu amakhulu kakhulu wokugembula aseJalimane, noma iklabhu yaseJalimane ehamba phambili yenyanga, kodwa ngakolunye uhlangothi sizokwethula kini amakilabhu wokugembula ama-PayPal aseJalimane amahle kakhulu. Okusho ukuthi, iklabhu yaseJalimane ehamba phambili ekuvumela ukuthi uphathe i-akhawunti nge-PayPal.
I-PayPal ishesha ukuthola enye yamasu okufakelwa adumile kakhulu nokukhishwa embonini yeklabhu yokugembula, futhi iJalimane alikho icala elikhethekile kuleli zinga.
Ukuchazwa kokuthi i-PayPal idume kakhulu, ngakho-ke ibucayi kakhulu ekilabhini yaseJalimane, ukuthi ngesibhamu eside i-e-wallet enkulu kunazo zonke emhlabeni. Cishe wonke amasayithi aku-inthanethi azokwazisa i-PayPal njengendlela yokufaka, ngakho-ke ayiphinde ihlanganiswe ngokumane i-eBay nokunye.
Akukhona kuphela ukuthi inkulu kunazo zonke, kodwa-ke iqonde kakhulu ukuyisebenzisa - ukuhamba nokugcina imali nge-PayPal kulula ngokuphelele.
Kufanele umane ucwilise 'isitolo' sisebenzisa i-PayPal, faka igama lakho lomsebenzisi le-PayPal kanye nomusho oyimfihlo, ne-voila oyikhokhile.
Ungathola kancane mayelana ne-PayPal njengecebo lokufaka ngaphezulu kwamakhasi ethu wezinhlelo zokufaka. Lapha sihlukanisa iningi lama-angles PayPal ngemininingwane ebanzi kakhulu, okubonisa iningi leminye imininingwane ephezulu kakhulu enayo.
Ngokwengeziwe, ungabheka ngaphansi komsindo wethu weklabhu yaseJalimane enikeza i-Paypal kubadlali.
Ingabe Amakhasino WaseJalimane Akwethembekile?
Ukudlala kumakilabhu wokugembula aku-inthanethi bekuyibhizinisi elinamaqhinga amaningi, bekukhona iklabhu ekhulelwa ngokuqhubekayo njengoba kunamanje, futhi kuwebhu konke bekungavikelwe kangako.
Ngenhlanhla, izicishamlilo, izinhlelo zokubethela kanye nomshuwalense we-malware zithuthuke kakhulu manje, ngakho-ke cishe alikho ithuba lokuthile okwenzekelayo ngobuqili bakho… noma amaseva ekilabhu enkulu kakhulu yaseJalimane ehlaselwa. By by by, lokhu akuyona into okufanele sonke siqale ukungayinaki, kufanele sitshelwe, iqiniso, siqhubeke nokunaka lezi zinto.
Ngokubona lokho, thina lapha eNetEntCasino sizokuqinisekisa ukuthi sikungenisa nje amakilabhu wokugembula aseJalimane aqonde kakhulu laphaya. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuphenya ukuphepha nenhlalo yawo wonke amakilabhu okugembula esiwahlola futhi sikunikeze ukuvivinya okusemthethweni kwalokho esibabheka njengabo.
Ukuhlola ukwethenjwa kwekilabhu yaseJalimane sizothatha umngcwabo ku:
Amalayisense ikilabhu yaseGerman enayo, ebenza bakwazi ukusebenza ezifundeni ezithile, futhi bavikele iziqinisekiso ezingokomthetho zabadlali babo.
Izinzuzo zeklayenti ezitholakala kusiza, nokuthi zishesha futhi zanele kangakanani ukuphatha izindaba zeklayenti.
Uhlobo luni lokubethela okusetshenziswa yiklabhu, nokuthi ngabe luphatha uhlelo oluphephile.
Umlando wama-Casinos eJalimane
Umlando othengelwe ukubheja eJalimane ungomunye wemithetho eyodwa engaqondakali, ujikelezwe yizimo ezisemthethweni, kanye noshintsho kusuka ezimakethe ezi-dim kuya emthethweni ocacayo ocacayo.
IsiJalimane senziwa ngaphandle kwezindawo ezihlukile ze-16, kanye nomthetho okhomba ngobunyoninco bokubheja kulezi zifundazwe ngokuqonda okuhlanganyelwe phakathi kwabo bonke okubizwa ngokuthi iGlücksspielstaatsvertrag. I-Glücksspielstaatsvertrag yaqinisekiswa ku-2008 futhi namuhla iyavuselelwa ngokuqhubekayo ngezibuyekezo ezintsha kanye nokunemba.
Isimo esiseJalimane sisafakazelwa ngezizathu zokuthi abadlali bavunyelwe ngokomthetho ukujoyina ukubheja ezindaweni lapho noma kunjalo bengavunyelwe ngempela ukubamba iqhaza ekubhejaneni. Naphezu kweqiniso lokuthi ukubheja kuqoshwa njengokungemthetho, kungenzeka ukuthi bakwenza endaweni efakwe esizweni esingaphandle kweJalimane, ngaleso sikhathi kulungile. Iqiniso litshelwe, iningi labantu bomdabu baseJalimane libheja ngokungaguquki, ngakho-ke umthetho manje usekela inzalo evulekile.
Ku-2011, ngokwesibonelo, uPius Heinz wawina ukuhleleka komhlaba kwe-poker, noma kunjalo ngaleso sikhathi kwakungekho mthethweni kuye ukuthi adlale i-poker, impela ngenxa yemithetho yakudala yaseJalimane.
Amakhasino EJalimane Amaselula Nemidlalo Yamaselula
Amakilabhu okugembula aphathekayo aseJalimane onlineIzindawo eziningi ezinhle kakhulu zekilabhu kulezi zinsuku zizoba nokuhlukahluka okuhlukahlukene kwekilabhu yazo, okusho ukuthi uzoba nenketho yokwazisa imidlalo engcono kakhulu yeNetEnt noma iyiphi indawo okuyo eJalimane, noma ngabe wenzani. Akunandaba noma ngabe uyahamba uyosebenza, noma ngabe uhleli kahle kulabo ohamba nabo esikhungweni sokuzijabulisa, noma uhambahamba nge-canine yakho edolobheni, inqobo nje uma unenhlangano yewebhu, ngaleso sikhathi uzoba ube nenketho yokudlala kulezi ziklabhu zokugembula eziguquguqukayo zamaJalimane.
Amakilabhu okugembula aseJalimane ahlukahlukene ahambisana nezinhlobo ezimbili: izindawo zokunakekelwa ezifinyeleleka kalula noma izinhlelo zokusebenza ezinikelwe.
Izindawo ezinamasheya ahlukahlukene zivezwa njengazo - ukuzijabulisa kwamaqembu akho owathandayo wokugembula amaJalimane enzelwe amaselula.
Lezi akuzona izindawo ezintsha ngaphandle kwezindawo zokuqala. Esikhundleni salokho, kulungiswa kuphela kokuqala okwenziwe ngekhodi entsha futhi kunikezwe amandla kumakheli e-web afanayo.
Izicelo eziphathwayo zeklabhu yaseJalimane ziyefana njengoba unolunye uhlobo lwezicelo olusebenzayo ocingweni noma kuthebhulethi. Uyazilanda kusuka lapho iya khona iklabhu yokugembula ngokwayo bese kuthi lapho usuhambile, idlale ngokungamangazi.
Inzuzo yezindawo eziguquguqukayo eziguquguqukayo zamaJalimane ukuthi azithathi indawo kumaselula wakho, yize izinhlelo zisebenza. Kungaba njengoba kungenzeka, izinhlelo zokusebenza zeningi ziqinisekisa umbhali weminye imidlalo, eceleni kwamasu angcono wokufaka nokusebenziseka.
Dlala ku-Casinos yaseJalimane Online
Amaqembu wokugembula alungile, ahlukahlukene Isizinda esingokomlando sekilabhu yaseJalimane - hlola. Iklabhu yokugembula ehamba phambili njalo ngenyanga - hlola. Ukuthembela kwekilabhu yaseJalimane - hlola. Akufanele yini kuthiwe okuthile ngezinto ezibalulekile? Akufanele yini kuthiwe okuthile ngokudlala eklabhu yaseJalimane online?
Zonke izinto ezibhekwayo, ukuqala, kufanele ukhethe iklabhu yakho. Ukuze wenze lokhu kufanele uphishekele isu esilincomayo ngenhla, ngokuqhathanisa izidingo zakho nophenyo lweqembu lethu lokugembula laseJalimane, futhi lokho kuzokunikeza ithuba lokukhetha. Noma-ke, ngakolunye uhlangothi, njengoba nathi siphakamisa okungenhla, ungavele ubheke elinye lamaqembu ethu okugembula aseJalimane enyanga.
Ngemuva kokukwenza lokhu, kufanele ukhethe ukuthi iyiphi indlela yokufaka oyidingayo oyisebenzisayo lapho uthenga / udonsa emuva. Njengoba sishilo ngenhla, iklabhu yaseJalimane eminingi eku-inthanethi izokunikeza amandla okukhokha nokuphatha i-akhawunti nge-PayPal. Le yindlela elula nephephe kunazo zonke yokukhokha kuwebhu, uma kwenzeka ukhethe lokhu uzovikeleka.
Nawe ngokufanayo udinga ukwenza izinto ezimbili ezengeziwe ngaphambi kokudlala kumaqembu wokugembula online aseJalimane. Bheka ukuthuthuka okunikezwayo bese ubheka nemidlalo efinyelelekayo. Ungaqonda ngaphansi kokuthi yiziphi izinhlobo zokuthuthuka ezifinyeleleka kwiklabhu yaseJalimane, kanye neningi lemidlalo eyahlukahlukene yeNetEnt.
I-Legal Legal German Casinos yaseJalimane
Njengoba sikhomba ngenhla, kunezindawo eziningi ezingaphansi ku-inthanethi ezikhulelwe noma ezingekho emthethweni. Cishe wonke amakilabhu wokugembula waseJalimane angokomthetho ngokuphelele, ngakho-ke kufanele ugcizelele ngokunikeza imali kuwe kubenzi bokubi.
Sihlola iningi lamakilabhu okugembula amaJalimane weNetEnt ngemininingwane eminingi ngaphambi kokuthi siwafake ku-rundown yethu enhle kakhulu, noma lapho sibabika njengeqembu elihle kakhulu lokugembula lenyanga. Ngakho-ke, ngenkathi senza lokhu, sisaqhubeka nokuthatha gander e-uhaleni lwabo, ukuphepha nokuphepha. Asisoze safaka iklabhu yaseJalimane engekho emthethweni esizeni sethu, ngakho ungaqinisekiswa ngemininingwane yokuthi konke okuthola lapha kwi-NetEntCasino kusemthethweni ngokuphelele futhi kuyiqiniso.
Yikuphi Ilungile I-inthanethi YaseJalimane Yekhasino Ngami?
Kuze kube manje, sithathe i-gander ezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zemakilabhu okugembula aseJalimane, noma kunjalo kungenzeka noma kunjalo udinga ukubona ukuthi yiliphi ikilabhu okufanele udlale kulo. Ungase ubuze ukuthi yiliphi iklabhu yokugembula eyiJalimane efanelekile ngawe?
Ukuphendula lo mbuzo, sizodinga ukuqedela izinto ezimbili. Okokuqala, kuzodingeka sithole ukuthi yiziphi izinto ozifuna kakhulu nezinkulu eklabhini, eceleni kwanoma yini ecacisa ukuthi usesha ngalesi sikhathi. Okwesibili, sizodinga ukuthola ukuthi yiziphi izinhlobo zokubekwa obala ezinikezwa yiklabhu yaseJalimane. Uma sikwenzile lokhu, singabona ukuthi iyiphi iklabhu enamaphuzu aveza okudingayo, futhi ngale mizila sizokuxhumanisa neklabhu yokugembula elikufanele ngqo.
I-175 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Playamo Casino
I-150 yamahhala i-spin bonus ku-VIPRoom Casino
I-165 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi eBetChan Casino
I-175 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit eSweden iCasino
I-115 spins yebhonasi yekhasino yamahhala eGrand Ivy
I-90 ayikho ibhonasi ye-casino ediphozithi ku-Casino engeziwe
I-25 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-CyberClub Casino
I-165 yamahhala e-Triobet Casino
I-60 yamahhala i-spin casino e-ExtraSpel Casino
I-85 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-888 Casino
I-60 yamahhala i-spin bonus ku-Kaboo Casino
I-165 yamahhala i-casino e-Gratorama Casino
I-95 yamahhala i-spin bonus ku-MainStage Casino
I-120 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Heroes Casino
I-35 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Casino yekhasi lephromoshini
I-115 ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-MrRingo Casino
I-160 ayikho ibhonasi yediphozi e-Euro Casino
I-175 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi eKaboo Casino
I-15 yamahhala i-spin bonus ku-VegasSpins Casino
I-45 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-NorgeVegas Casino
I-135 yamahhala i-spin bonus ekamelweni leCasino
I-60 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-CyberClub Casino
I-85 yamahhala i-spin bonus ekamelweni leCasino
I-85 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi kwikhasi le-Promotion Page